တစ်ယိုနှင့်ဗော့ဒ်ကာထဲကသောက်သုံး Braga - အဟောင်းကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်အချဉ်ယို၏ချက်ပြုတ်နည်းများ
ယိုထဲက Braga - ပြည်တွင်းယမကာများအတွက်ရိုးအမြစ်ကိုအောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
စနစ်တကျ moonshine ချက်ပြုတ် ဖြစ်နိုင်သောနှင့်အိမ်မှာ, အိမ် analogue ၏စျေးနှုန်းသိသိသာသာနိမ့်နေစဉ်ကကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းထက်ပိုဆိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမြည်းစမ်းဖို့။ မကြာခဏကြောင့်စင်ကြယ်သောပုံစံတွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောယို၏ထွက် Home-ပြသနာတွေဘီယာပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်သောက်သုံးနေသည်။ ရိတ်သိမ်းအပြင်, လိုအပ်သောသကြားပြီးသားလည်းမရှိ, အရသာအသီးအရသာဖျောပွနိုငျသညျ။
မူရင်းသောက်နေတဲ့ယိုထဲက Home-ပြသနာတွေဘီယာစေရန်ကူညီပေးပါမည်, ကအကောင့်သို့သူမ၏ချက်ပြုတ်မှာထိုသို့သောအမှုကိုအယူရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
ရေ၏အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်။ အဆိုပါစံပြဂျပေါက်သို့မဟုတ်ကောင်းစွာရေပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုထိပုတ်ပါရေကိုယူပါကအညစ်အကြေးရန်, တစ်နေ့တာအတွင်း sludge သာ. ကောင်း၏အောက်ဆုံးမှအခြေချ။ သငျသညျအေးခဲအစားအစာသို့မဟုတ် filter ကိုအားဖြင့်ရေသန့်ရှင်းရေးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကကြွက်ကြွက်ဆူသောနှုနျးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ကလျင်မြန်စွာမွှုပျထဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အရည် carbonated တစ်ဦးချွန်ထက်သောအရသာရှိသည်လိမ့်မယ်မြည်းစမ်းဖို့အစပြုလာသောအခါ Braga အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကချွန်ထက်ခွဲခြာလက်တစ်အက်ဆစ်စတင်ခဲ့ပြီးဆိုလိုသည်။
အဆိုပါအချဉ်ပေါက်နေတဲ့သောက်စရာအတွက်ရပ်တန့်သောအခါသွန်းလောင်းနေဆဲအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်, က filtered နှင့်အချို့သောစွမ်းရည်ယူဂိုဆလားဗီးယားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယို၏ပြသနာတွေဘီယာပြင်ဆင်နေသောအခါ, အချိုးအစားအထူးများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ပြင်ဆင်မှုအဘို့အသင်တို့သည်ဤအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်:
3: လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေယို 1 အချိုးအတွက်နွေးရေထဲမှာပျော်ဝင်။
ယို 1 ကီလိုကို 30 ဂရမ်တစ်ခုငွေပမာဏအတွက်ကိတ်မုန့်တဆေးကိုထည့်ပါ။
ယိုနှင့်တဆေးကို mash စာရွက်
သငျသညျအခြေခံ wort ၏ရိုးရှင်းစာရွက်အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်တဲ့သေးငယ်တဲ့ခံတပ်နှင့်အတူတစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောသောက်စေလိုလျှင်။ ဤနည်းအားဖြင့်တစ်ယိုပြီးခြောက်သွေ့သောတဆေးမှာ Home-ပြသနာတွေဘီယာပြင်ဆင်နေ။ နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဒီ option ကိုအရက်ဘီယာအရက်ချက်တူစေမည်, ဒါကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကာလများတွင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ ဘီယာအရက်ချက်ရန် Home-ပြသနာတွေဘီယာအလွတ်ဖြစ်လာလျှင်, ထိုမဲဆန္ဒနယ်မှသကြားနောက်ထပ် 1.5 ကီလိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
အဟောင်းကိုယို -3ဌ;
ခြောက်သွေ့သောတဆေး - 25 ဂရမ်,
30 ဒီဂရီမှအပူနွေးရေ, ယိုမှေးမှိန်။
ကွန်တိန်နာထဲသို့အရောအနှောကိုလောင်းနှင့်နွေးထွေးသော, မှောင်မိုက်အရပ်၌ထားတော်မူ၏။ လည်ပင်းတွင်ရော်ဘာလက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်။ အဆိုပါလက်အိတ်ကျရောက်သည်အထိထားခြင်း။
အဲဒါကို wort အတွက်ဖြစ်ခြင်း၏သီလအသုံးပြုပုံကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သဘာဝလမ်းအတွက်ယင်း၏အချဉ်ပေါက်စတင်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်အရက်ကိုသောက်ရန်မူရင်းစာရွက်ထဲမှာဘီယာ, ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းများ၏များအပြင်အဟောင်းယိုကနေကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဘီယာပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်အတူ။ မိမိအချက်ပြုတ်တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတဆေးနှင့်စပျစ်သီးပျဉ်၏ထို့အပြင်အတူစာရွက်ထဲမှာထက်လျော့နည်းအချိန်ကြာပါတယ်။ သငျသညျ Raspberry သို့မဟုတ်စတော်ဘယ်ရီယိုကိုသုံးနိုင်သည်။
ယို -2ဌ;
lager ဘီယာ - 500 ml ကို;
သကြား - 1,5လီတာ;
ရေ - 10 လီတာ။
လူအပေါင်းတို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေပါ။ lukewarm ရေသူတို့နှင့်အတူမှေးမှိန်နှင့်ပုလင်းကစော်ဖောက်ခြင်းသို့သွန်းလောင်း။
ကစော်ဖောက်ခြင်းကုန်ကြမ်းကနေ, များလွန်းတဲ့သောက်စရာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဥပမာ, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရက် Braga Currant ယို၏အလွန်မူရင်းအရသာရှိပါတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်တစ်ခုအရေးပါသော, တဆေးများ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူလက်ျာအချိုးအစား၏ပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကောင်းစွာ-သတ်မှတ်အရေအတွက်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။
ငြာယို -2ကီလိုဂရမ်;
ရေ -6ဌ;
တဆေး - 50 ဂရမ်,
သကြား -1 ကီလိုဂရမ်။
ယို၏ mash စာရွက်သူမ၏ strain အဆုံးသတ်ထားသည်။
အချဉ် workpiece လည်းယင်း၏ပြင်ဆင်နေ၏အခြေခံပေါ်တွင်အားသာချက်နှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် Home-ဘီယာအရက်ချက်များအတွက်ယိုထဲက Home-ပြသနာတွေဘီယာ ။ ဖြစ်စဉ်ကိုကူညီပေးသည်တစ်ခုထပ်တိုးအစိတ်အပိုင်းစဗစျြသီးခြောကျဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကစော်ဖောက်ခြင်းအပူချိန်စစ်အစိုးရကတွန့်ဆုတ်မနေသင့်နှင့်အတူ 1-3 လကြာကြာရှည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အသက် 18 မှ 20 ဒီဂရီ၏အကွာအဝေးအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိရန်။ သင်သောက်၏ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်လိုပါကကအနည်းငယ်သကြားထည့်ပါ။
အချဉ်ယို -2ဌ;
ရေ -5ဌ;
အမှောင်စပျစ်သီးပျဉ် - 100 ဂရမ်
အဟောင်းကို compote နှင့်ယို၏ Braga
Braga compote နှင့်ထိနျးသိမျးထဲကအလွန်အရသာရှိတဲ့ကိုသောက်လော့။ ဒီစာရွက်ထဲမှာလည်းကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့တဆေးကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီချက်ပြုတ်နည်းလမ်းတစ်အင်္ဂါရပ် dilution များအတွက်အရည်အဖြစ်ရေဒါပေမယ့်လည်း compote မသာအသုံးပြုကြသည်, ဒါ့အပြင်အားဖြင့်ရရှိသောအရက်အဖျော်ယမကာမြည်းစမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
compote -3ဌ;
ရေ -2ဌ;
ပူနွေးတဲ့ရေ - 15 ဌ;
ခြောက်သွေ့သောတဆေး - '15
ယိုနွေးရေနဲ့ compote နှင့်အတူရော။
ပူဖောင်းပေါ်လာတဲ့အခါ, သငျသညျ dilution ယိုထဲမှာတဆေး starter လောင်းနိုင်။
အဟောင်းကိုယိုကနေ Braga ရက်အနည်းငယ်များအတွက်နွေးရာဌာန၌ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ရပါမည်, ပြီးတော့သူကစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အိမ်မှာယမကာများထုတ်လုပ်စိတ်ဝင်စားသောသူတို့အဘို့, moonshine များအတွက်ယို၏အမှန်တကယ် mash စာရွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ချယ်ရီ, စတော်ဘယ်ရီ, Raspberry သို့မဟုတ်ပန်းသီး: သူ့အဘို့, သင်သည်မည်သည့်ယိုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ လုံးဝယိုထဲမှာသကြားမပါဘဲလုပ်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်၏ထက်ဝက်အကြောင်းကိုဆံ့သငျ့သညျ။ လက်ရာမြောက်သောအရသာများအတွက်, သငျသညျအနညျးငယျ vanilla ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဟောင်းကိုယို -6ဌ;
ရေ - 15 ဌ;
compressed တဆေး - 250 ဂရမ်
တဆေးအကြောင်းကို 10 မိနစ်ထွက်ခွာမည်, နွေးရေထဲမှာပျော်ဝင်။
Braga အတွက်တဆေးကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်2ပတ်ကြာအပူအတွက်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့။
အဟောင်းယိုကနေ moonshine ပြသနာတွေဘီယာချက်ပြုတ်ခင်မှာပေါင်းခံအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Raspberry ယို၏ Braga
တစ်ခု ပြော. မကုန်နိုင်စပ်အရသာနှင့်အတူမသောက်ရသည့် mash စာရွက် Raspberry ယို၏အသုံးပြုမှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်တွေဖြစ်တဲ့အရောအနှောအပူနှင့်တစ်ဦးတဆေးကိုထည့်သွင်းအဖြစ်ဖြစ်စဉ်များများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစော်ဖောက်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးသွားပြီးနောက်ဒဏ်ငွေဆန်ခါသို့မဟုတ်ရော်ဘာပိုက်သုံးပြီးမိုးရွာသွန်းမှုထံမှ filtered ဖြစ်ပါတယ်။
ယို - 1, L;
စပျစ်ရည်ကိုတဆေး - 1 ဗူး,
တစ်ဦးကွန်တိန်နာယိုထဲမှာထည့်ပြီးရေအေးလောင်း။ အဆိုပါစပျစ်သီးပျဉ်ကိုငါသွန်းလောင်း။ အရောအနှောနွေး။
တဆေး Make: နွေးရေထဲမှာယူနီဖောင်းသည်အထိတဆေးကိုပျော်ဖို့။ အေးပြီးနောက်အချဉ်ပေါက်ဖို့ wort လောင်း။
ရေထောင်ချောက် Install နှင့်နွေးထွေးသောအရပ်ဌာန၌ထားတော်မူ၏။
အိမ်တွင်တစ်ယိုထဲက Braga 8-15 နေ့ရက်ကာလအဘို့ချဉ်ပေါက်ရမယ်, ကနေ့တိုင်းရောနှောဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဒီသောက်၏ဂန္အပြောင်းအလဲ၏ Braga စဉ်းစားသည် ပန်းသီးယို ။ ဤသည် component တစ်ခုကနောက်ပိုင်းတွင်ချက်ပြုတ်နှင့်ဘီယာအရက်ချက်နိုင်ပါသည်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးပြည့်နှက်အလင်းအရသာ, ပေးနိုင်သည်။ အိမ်လုပ်အရက်ချက်ပြုတ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပင်သခင် novice နိုင်ပါတယ်။
ပန်းသီးယို -3ဌ;
တစ်ဦးကွန်တိန်နာထဲသို့အရောအနှောကိုလောင်းနှင့်နွေးထွေးသောအရပ်ဌာန၌ထားတော်မူ၏။ လည်ပင်းတွင်ရော်ဘာလက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်။ သူမပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်သည်အထိထားခြင်း။
strain Braga ။
တစ်ယိုထဲက Braga ပေါ့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရှင်းလင်းနေတဲ့ယို mash ထဲကယူသွားတတ်၏အခါ, တဆေးကို၎င်းပေါင်းခံနေစဉ်အတွင်းမှုတ်နှင့်အဖျော်ယမကာအတွက်ပြသသောအားမီးရှို့ရာယဇ်တစ်အရသာ, ပေးမယ့်အင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ရှင်းလင်းချက်၏နည်းလမ်းတွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နှုနျးဖြစ်နိုင်သည်:
အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှုရလဒ် mash မှဖယ်ရှားပစ်သည်,
1 နာရီတစ်ဦးအချိုးအစားအတွက်အသုံးပြု bentonite ။ ဌ။0င်မှာပါ, အဖျော်ယမကာထုံမွှန်းနှင့်အရောအနှော၏5လီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး4နာရီရှိ၏
hibiscus လက်ဖက်ရည် (10 လီတာ, လက်ဖက်ရည်အဖျော်ယမကာ၏ 70 ဂရမ်) ကိုအသုံးပြုသည်,
(10 လီတာဗော့ဒ်ကာ 1 tbsp .. ) citric အက်ဆစ်ဖြည့်စွက်,
တစ်ဦးအရက်အတူ mash ပေါ့။
ပင်လယ် buckthorn နှင့်အတူလက်ဖက်ရည်
အိမ်မှာစပျစ်သီးစပျစ်ရည်ကို - လွယ်ကူသောစာရွက်
အိမ်မှာစတော်ဘယ်ရီ liqueur အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘိုဟိုက်ဒရိတ်-အခမဲ့အစားအသောက်များတွင်: Menu ကို
အဆိုပါ urethra ထံမှ Purulent ဥတု
ဖက်ရှင်ဖိနပ် - Fall 2016
Multivarka အတွက်နို့နှင့်အတူ Semolina
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် tile ကို
တိုင်ကြားမှု - သည်, အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, လိုအပျသလဲ